Ndewo, nabata na nkuzi 'Excel' a. Dị ka onye na-achọsi ike nke ngwanrọ Microsoft suite, m na-atụ aro ka ị chọpụta na/ma ọ bụ chegharịa nyocha data na 'Excel'. Ezubere maka ndị niile na-ege ntị, nyocha a na-enweta n'ezie maka onye ọ bụla na nzọụkwụ site na nzọụkwụ ga-enye gị obi ike ka ị na-aga n'ihu.
Achọrọ m gị njem mara mma nke ukwuu.
Iji tebụl mmalite data (dị maka nbudata), ana m atụ aro ka ị mụta, na nkuzi a, ka…:
· ka ala a data analysis project (reusable in mgbasa ozi nbudata)
· ọrụ na ezigbo ihe atụ data
· suivre ọtụtụ nzọụkwụ site nzọụkwụ4 usoro dị iche iche)
· compute ọnụ ọgụgụ nkọwa (pụtara, etiti, max, min + ọrụ 'pụrụ iche')
· -arụrụ ọrụ nyocha data nyocha na 'Excel' (AED)
· nyochaa nwere usoro dị elu karịa (mgbagha ọrụ)
· nweta Akuko synthetic zuru oke (ike)
· kwadebe et utiliser Tebụl Excel
Nyocha data Excel: jiri 'Excel' nyochaa data. January 19th, 2022Tranquillus
GỤỌ Zụlite gị intercultural ọgụgụ isi
gara agaỌzụzụ Excel - kwalite nrụpụta gị na Excel
-esonụKedu ndị ọkachamara ga-ewepụta akwụkwọ ikike ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa kemgbe Jenụwarị 24, 2022?